Nzira yekusimudzira sei nekuita iwe web search kutsvaga munzvimbo yako?
Ngatitange nekutsvaga kuti chinzvimbo chekutsvaga tsvakurudzo chekutsvaga chaiyo chinomirirei (zvisingawani nzvimbo yeOOO). Tsvaga Engine Optimization inozivikanwa nokuda kwekugadzirisa kunoshanda kwechidimbu chimwe chemashoko akatumirwa pamapeji ako ewebhu, kuitira kuti zviwedzere kuwedzerwa kuGoogle's search crawlers kuitira kuonekwa kwakanaka kwepaIndaneti mune urongwa hweSERPs. Tichifunga nezvekutsvaga kwekutsvaga kwewebhu pahutano hwemunharaunda, inomirira nzira yekuita bhizinesi rako rekuInternet riratidze pakati pemigumisiro yekutanga kune zvikumbiro zvekutsvaga. Kazhinji kazhinji, yakadaro yekutsvaga tsvakurudzo yekuita zvakanaka inotaridzirwa kushanda pane zvinyorwa zvinyorwa uye zviri mukati mekugadzirwa kwemashamba kuti zvibudirire nokukurumidza paIndaneti kuwedzera kukurudzira kwekutengeserana kwako. Pasi pandinenge ndava nekukurukurwa kwenguva pfupi kumativi ose ekubata nekutsvaga kwekutsvaga kwebhundaneti kunoshanda panzvimbo yemo.
Pakati pezvinhu zvakakosha pano apa inomira Google yako Bhizinesi Yangu Bhizinesi uye web search optimization inoda. Sei uchifanira kuuya pakutanga uye mberi? Kungofanana nokuti inotendwa kuti ndiyo nharaunda yepo iwe uripo paIndaneti, iyo ine mikana yakasimba kukuratidzwa zvakananga pakati pekutanga kwekutsvaga kwemashizha emunharaunda. Zvinofanira kuitika kuti iwe hauna kumboshanyira Google yako Bhizinesi Yangu Bhuku, raiwana kana kutanga kuzadza yako yaive ikozvino. Heino urongwa hwezvinhu zvaunokurudzirwa kuti zvivhare mufomu yako yekutsvaga webhuta: tsanangura zita rako rebhizimisi rakakwana, tsanangudzo yaro muchidimbu pamwe nekushanda purogiramu uye nhamba dzenhare, rako reji rekutsvaga peji, uye mamwe mapikicha anogutsa emushandi wako wekutengesa. Kuita kudaro, unogonawo kushandisa Google Posts, shandisa Google Plus uye dzimwe nzvimbo dzemazuva ano mukati maro. Uye usakanganwa kukurudzira vamwe vashandisi kusiya mamwe maongorori mubhizinesi rebhizimusi rako, nekuisa zvinyorwa zvitsva nekuvandudza zvinyorwa zviripo panguva.
Zvadaro, ita kuti mushandirapamwe wekutsvaga kwekutsvaga kwebhu iwe uri kutengesa zvakanaka pane zvinyorwa zvinyorwa. Ndinokurudzira kugadzira cheki nekusarudza imwe yevhidhiyo yekutsvaga Dhiyabhorosi Zvirongwa. Nenzira iyo iwe uchakwanisa kuona kuti zvakanaka sei uye mune bhizinesi zvinyorwa zvinotsanangurwa iwe webhusaiti. Zvizhinji zvezvinongororwa zvinoda matanho akafanana nezviito, saizvo zvatatotanga kuvhara paGoogle My Business Page. Ndinokurudzira kuongorora kaviri nokuti injini yekutsvaga inosarudza kuratidza chete mhinduro yakarurama, saka iwe unofanira kubvisa chero dhimwe dzisina kunaka kana kuti dzisina kururama pamusoro pebhizimisi rako. Hapana chikonzero chekudzidzira nguva yako nekuedza kwako, sekushanda pamwe nezvinhu izvi zvishoma zvinogona kukupa imwe nguva pfupi inobatsira pane iwe webhu hwekutsvaga tsvakurudzo yekugadzirisa, saka iko kukurudzira kukurumidza kukunda kwako.
Pakupedzisira, ndinokurudzira kuva nekufungisisa kwakanaka kwehupenyu hwevanhu. Yeuka, ivo vanonyanya kukoshesa, kunyanya maererano nemunharaunda yenyu yekutsvaga tsvakurudzo yekugadzirisa. Usanonoka kuita zvinyorwa pane zvimwe zvehupfumi sezvakaita Facebook kana Twitter, uchitarisa hurukuro huru uye hutungamiri uchitungamirira nzira kuenda kune yako huru website. Kuita izvi, iva nechokwadi chekuti urambe uchidzoka pamabasa ako ekutumira, uye ubhadhere zvakakwana kuhutano hwehutano. Tsvaga maitiro makuru ekutsvaga kwevanhu, sekuzivikanwa neGoogle nedzimwe injini, kuedza kwako pano kuchava nemigumisiro chaiyo yehutano hwekutsvaga kwako kwehutayiti zvakakwana Source .